Nhoroondo yeMalta pane iyo hombe skrini
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Malta Kuputsa Nhau » Nhoroondo yeMalta pane iyo hombe skrini
tsika nemagariro • Malta Kuputsa Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Nheyo yemifananidzo nerubatsiro rwefoundation show
Nakidzwa neMalta kuburikidza nelenzi yekuuya kwekugadzirwa kwakachengetedzwa zvakachengetedzwa muMalta panguva ya2020.
Malta yaive kumashure kweye 11 kuburitswa kwemafirimu muna2020 na2021 kunyangwe hosha yeCOVID-19 - zvese zvakaitwa zvichitevera nzira dzekuchengetedza.
Kubva kuHallmark kuenda kuApple TV's nyowani sci-fi inonakidza, Malta yakagadzika danho nenzvimbo dzayo dzakanaka dzepanyama uye mapurani.
Yakagadzirirwa kuve anonyatsoziva mafirimu akatorwa achitora firimu muMalta ndeMutambo weZigaro, Jurrasic World Dominion, Gladiator, uye Troy, kungodoma mashoma.
Kumba kune akati wandei UNESCO World Heritage Sites, Malta yakashanda semufirimu wakagadzirirwa gumi nerimwe zvirikuuya, kusanganisira mbiri dzekuNorth America, dzese dzakaburitswa zvakachengeteka panguva yeCOPVID-19 denda. Zvitsuwa zveMediterranean zvinonyanya kuzivikanwa nenzvimbo dzazvo dzakanaka, dzinoyevedza uye zvivakwa zvinokatyamadza zvakakwana nzvimbo yemufirimu. Kuonekwa kwakasiyana kweMalta kwaishandiswa mumabhaisikopo senge Kudanana Mushonga, Sanganisa kumusoro muMediterranean, uye Apple TV's nyowani sci-fi inonakidza, hwaro (yakatorwa muna 2021).
Dambudziko mu2020 raive, hongu, kuchengetedzeka kwevatambi nevashandi pamwe nevagari veMalta. Hofisi yeMutevedzeri weGurukota rakaburitsa runyorwa rwepamutemo, rwakatemerwa zvekutevedzera kune vese uye vese vezvenhau vashandi kana kutora firimu kunoitika muMalta panguva yeCOVID-19 denda.
Mumakore ese, Malta yakwezva akati wandei emifananidzo yezvigadzirwa inosanganisira Game of Zvigaro zvoumambo, ndouya aikwanisa, Troy, pamwe nekumisikidzwa kwazvino kweiyo Jurassic World franchise, Jurassic Nyika: Dominion. Pakati pegumi nerimwe gumi makuru emitambo yemafirimu akapfurwa muMalta mu2020, nyika yakakwanisa kushandisa tarenda remuno revashandi vavo uye nemasevhisi, zvakagadzira zviuru zvemabasa evashandi veMalta.
Kudanana Mushonga - Shot zvachose muMalta, iine zviitiko mumaguta eValletta, Fort St. Elmo, Marsaxlokk, Mellieha neAttard. Set kusunungura muna 2021.
Sanganisa Up muMediterranean - Kupfurwa muguta reValletta, iyo Phenicia Hotel, Upper Barrakka Gardens, uye Naxxar's Palazzo Parisio. Inowanikwa izvozvi pane iyo Hallmark Chiteshi.
Jurassic Nyika: Dhimoni - Mafirimu ekumisikidza mafirimu akatorwa muguta reFloriana, Valletta, Birgu, Pembroke, Mellieha. Set kusunungura mumitambo June 2022.
Nheyo - Akapfura muna 2021 kuMalta Film Studio, Fort Manoel. Set kusunungura mukudonha kwa2021.
Jurassic World Dominion mufananidzo nerubatsiro rweimdb
Gurukota rezveKushanya uye Kudzivirirwa kweVatengi, Clayton Bartolo, akataura nezve gore rapfuura muindasitiri yemafirimu, achiti "zvaive zvakanaka kucherechedza kuti pakati peCVID-19 denda, Malta yakakwanisa kukwezva zvigadzirwa gumi nezvina muna 11, nemari yese ye € 2020 miriyoni (approx. $ 32USD). ” Minister vakaenderera mberi vachiti vanotarisira kuzadzikiswa kweMalta Film Studios Master Plan kusanganisira matanho ekutanga eMalta.
Malta Film Commissioner, Johann Grech akawedzera kuti zvakakosha kuti uzive kuti zvigadzirwa zvakagadza Malta seimwe yenzvimbo dzavanotora mafirimu zvisinei nemamiriro ezvinhu nematambudziko akamuka nekuda kwedenda re COVID-19 muna 2020. "Malta iri kuratidza kugona kwayo, kusimba kwayo , kugona kwayo. Tose pamwe - takakwanisa kuzadzikisa vimbiso yedu yekutambira zvigadzirwa nevashandi vakanakisa, basa rakanakisa nenzvimbo huru uye zvakanyanya kukosha, zvakachengeteka. Tinodada netarenda redu remuno. ” Grech akadaro.
Sanganisa kumusoro muMediterranean - mufananidzo unofambidzana neiyo Hallmark Channel
Zvitsuwa zvine zuva reMalta, pakati peGungwa reMediterranean, zvine musha wakasarudzika wenhaka yakasimba, kusanganisira huwandu hwakanyanya hweUNESCO World Heritage Sites mune chero nyika-nyika chero. Valletta yakavakwa neanodada Knights yeSt.John ndeimwe yeanoonekwa neUNESCO uye European Capital of Culture yegore ra2018.Malta patrimony mumatombo ematombo kubva kune ekare-emahara emabwe ekuvakisa pasi, kune imwe yeBritish Empire inotyisa kwazvo. masystem ekudzivirira, uye anosanganisira musanganiswa wakapfuma wemapurani epamba, echitendero neemauto kubva panguva dzekare, medieval uye nguva dzekutanga Nemamiriro ekunze ane zuva rinotyisa, mahombekombe anoyevedza, hupenyu husiku hunobudirira uye makore zviuru mazana manomwe zvemazana enhoroondo inonakidza, pane zvakawanda zvekuona nekuita. Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Malta, shanya www.chandiramani.com.
About Malta Firimu Commission
Nhoroondo yeMalta senzvimbo yekuenda kunogadzira mafirimu inodzokera kumashure makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe, panguva iyo zviwi zvedu zvakatamba mutambo kune zvimwe zvepamusoro-soro zvigadzirwa zvekutepfenyura muHollywood. Malta Film Commission yakagadzwa muna92 nechinangwa chechipiri chekutsigira nharaunda inogadzira mafirimu, ukuwo ichisimbisa chikamu chevashandi vemafirimu. Mumakore gumi nemanomwe apfuura, kuyedza kweFilm Commission kutsigira indasitiri yemuno yemafirimu kwakakonzera mari dzakasiyana siyana dzekukurudzira, kusanganisira chirongwa chekurudzira mari, Malta Film Fund, uye Co-Production fund.
Kubva 2013, kuiswa kwegadziriro nyowani kwakatungamira mukukura kusati kwamboitika muindasitiri yemuno yemafirimu, nezvigadzirwa zvinopfuura zana zvakatorwa muMalta zvichikonzera kudarika mamirioni mazana matatu emadhora ekudyara akananga kunze kwenyika akaiswa muupfumi hweMalta.
Dzimwe nhau nezve Malta
Mutungamiri weTanzania: Nhamba yekutanga yevashanyi mushandirapamwe mu ...
Hotera dzeHawaii Dzichikwevera Mune Mari Yakawandisa kupfuura Makore maviri Ekupedzisira
Guam isina Korea Vashanyi ikozvino nhoroondo
Hutano Hwepasi rose: Nyika Itsva Mushure meCOVID
United Airlines inopa PayPal QR makodhi sekubhadhara kutsva ...
Ontario Vanamukoti: Kunetseka Kwemakuva paChirongwa Chitsva chekuvhurazve
Zvigadzirwa zvekusimudzira bonde zvisina mvumo zvakatorwa kubva...
European Union inorambidza vafambi veAmerica
Maldives Yakapfuma Tsika Nhau inosheedzera ...
India neGerman Bilateral Tourism Chibvumirano Chasainwa
Zvimwe Palma de Mallorca, Gran Canaria, Fuerteventura ...
Samui kuPhuket ikozvino zvakare paBangkok Airways
Hapana zvinorambidzwa: Russia inotangazve zvizere nendege ne ...
Kubatanidza Yekushanya Yakasimba Nesimba Rinovandudzwa
Ndege dzeEuropean dziri kutsigira yakaoma nguva yechando ...